ပထမ ဦး စွာကြက်သားချေးသည်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာနှင့်မတူပါ။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာသည်ပြိုကွဲခြင်း၊ ကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ကောက်ရိုး၊ ကိတ်မုန့်၊ မွေးမြူရေးမြေ, ဇာ၊ မှိုအကြွင်းအကျန်နှင့်အခြားကုန်ကြမ်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ တိရစ္ဆာန်မြေ man ဇာသည်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရန်ကုန်ကြမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
စိုစွတ်သော (သို့) ခြောက်သွေ့သောကြက်မြေ man ဇာသည်ကစမဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ဖန်လုံအိမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးခြံများနှင့်အခြားငွေသားကောက်ပဲသီးနှံများကိုအလွယ်တကူပျက်စီးစေနိုင်ပြီးလယ်သမားများအတွက်ကြီးမားသောစီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကြက်သားချေးကုန်ကြမ်း၏အန္တရာယ်များကိုစတင်လေ့လာကြည့်ကြစို့၊ ကြက်သားချေးသည်အခြားတိရစ္ဆာန်ချေးထက်ပိုမိုထိရောက်သည်ဟုလူတို့အဘယ်ကြောင့်ထင်မြင်ကြသနည်း။ ကြက်သားချေးကိုအပြည့်အဝဘယ်လိုထိရောက်စွာသုံးနိုင်လဲ။
ဖန်လုံအိမ်များနှင့်ဥယျာဉ်ခြံများတွင်ကြက်ချေးကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်အလွယ်တကူဖြစ်ပွားနိုင်သောဘေးအန္တရာယ် ၈ ခု
၁။ အမြစ်များကိုမီးရှို့ပါ၊ ပျိုးပင်များကိုမီးရှို့ပါနှင့်အပင်များကိုသတ်ပါ
မသန့်ရှင်းသောကြက်သားချေးကိုအသုံးပြုပြီးနောက်သင်၏လက်ကိုမြေထဲသို့ထည့်လိုက်လျှင်မြေဆီလွှာအပူချိန်သိသိသာသာမြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ လေးနက်သောဖြစ်ရပ်များတွင်အလွှာတစ်ခုသို့မဟုတ်သေတ္တာအပြည့်အ ၀ သေဆုံးခြင်းသည်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်ပြီးအလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်နှင့်မျိုးစေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီတို့တွင်ကြက်ချေးအသုံးပြုခြင်းသည်အန္တရာယ်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချိန်တွင်ဖန်လုံအိမ်အတွင်း၌အပူချိန်မြင့်မားပြီးကြက်မြေ man ဇာ၏ကစော်ဖောက်ခြင်းကအပူများစွာထွက်စေပြီးအမြစ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ။ ကြက်သားချေးကိုဥယျာဉ်ခြံတွင်ဆောင်းတွင်းနှင့်နွေ ဦး ရာသီများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အမြစ်နားနေချိန်အတွင်းတွင်ဖြစ်သည်။ အမြစ်ကိုလောင်ကျွမ်းပြီးသည်နှင့်လာမည့်နှစ်တွင်အာဟာရများစုဆောင်းခြင်း၊
၂။ မြေဆီသြဇာကောင်းမွန်ခြင်း fruit အသီးထုတ်လုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်
ကြက်မြေ man ဇာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းသည်မြေဆီလွှာတွင်ဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်ပမာဏများစွာကျန်ရှိနေပြီးကြမ်းတမ်းခြောက်စတုရန်းမီတာလျှင် ၃၀ မှ ၄၀ ကီလိုဂရမ်ဆားနှင့်မြေတစ်10ကဆား ၁၀ ကီလိုဂရမ်သည်မြေဆီလွှာစုပ်ယူမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုအကြီးအကျယ်ကန့်သတ်ထားသည်။ ။ ခိုင်ခံ့သောဖော့စဖိတ်ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ပိုတက်စ်ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ကယ်လစီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ သွပ်၊ သံ၊ ဘိုရွန်၊
ရလဒ်အနေဖြင့်ဓာတ်မြေသြဇာအသုံးပြုမှုနှုန်းသည်တစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်လျော့ကျသွားပြီးသွင်းအားစုကုန်ကျစရိတ်မှာ ၅၀ မှ ၁၀၀% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။
၃။ မြေဆီလွှာကိုအာဟာရဖြစ်စေပြီးအမျိုးမျိုးသော rhizosphere ရောဂါများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါများဖြစ်ပေါ်စေသည်
ကြက်မြေ man ဇာ၏ pH သည် ၄ ​​ခန့်ခန့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အက်ဆစ်ပြင်းပြီးမြေကြီးကိုအက်စစ်စေပြီးဓာတုဒဏ်ရာနှင့်ပင်စည်နှင့်အမြစ်တစ်သျှူးများအားအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခြင်း၊ ကြက်ချေး၊ မြေဆီလွှာမှရောဂါများကိုသယ်ဆောင်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်များစွာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ - ဗက်တီးရီးယားများ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များသယ်ဆောင်လာပြီး ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။
အပင်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်း၊ အဝါရောင်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ကျုံ့ခြင်း၊ ပန်းပွင့်များနှင့်သစ်သီးများမရှိခြင်းနှင့်သေခြင်းပင်ဖြစ်ခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ၊ ကပ်ရောဂါ၊ အပင်ပုပ်ခြင်း၊ အမြစ်ပုပ်ခြင်းနှင့်ဘက်တီးရီးယားယိုယွင်းခြင်းတို့သည်ကြက်မြေ man ဇာအသုံးပြုမှု၏အထင်ရှားဆုံးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။
4.Root ထုံး nematode ကျခြင်း
ကြက်သားမြေ ure ဇာသည်စခန်းချနေရာဖြစ်ပြီးအမြစ်တွယ်သည့်အကျိတ်များအတွက်နေရာဖြစ်သည်။ အမြစ် - ထုံး nematode ကြက်ဥအရေအတွက် 1000 ဂရမ်နှုန်း 100 ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်မြေ man ဇာရှိကြက်ဥများသည်နေ့ချင်းညချင်းသောင်းနှင့်ချီ။ ပေါက်ရန်လွယ်ကူသည်။
Nematodes သည်ဓာတုပစ္စည်းများအလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်ပြီး၎င်းတို့သည်အလျား ၅၀ စင်တီမီတာမှ ၁.၅ မီတာသို့လျင်မြန်စွာရွေ့လျား။ ကုသရန်ခက်ခဲသည်။ Root-knot nematode သည်အထူးသဖြင့် ၃ နှစ်ကျော်သောအဟောင်းများအတွက်သေစေနိုင်သောအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၆။ သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သော၊ အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လုပ်ပါ၊ ပျိုးပင်များကိုသတ်ပါ
မီသိန်း၊ အမိုးနီးယားဓာတ်ငွေ့နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များထုတ်လုပ်ရန်ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်ကြက်ချေးသည်မြေဆီလွှာနှင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအက်စစ်ပျက်စီးမှုနှင့်အမြစ်ကိုပျက်စီးစေခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်ပိုမိုလေးနက်သည်၊ အမြစ်ကိုမီးရှို့သဖြင့်၊
ကြက်မြေ of ဇာကိုအဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းသည်အမြစ်စနစ်အတွင်းအောက်စီဂျင်နည်းခြင်းနှင့်ကြီးထွားမှုအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ကြက်မြေ man ဇာကိုမြေဆီလွှာထဲသို့ထည့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်စဉ်အတွင်းမြေဆီလွှာထဲတွင်အောက်စီဂျင်ကိုစားသုံးသည်။ မြေဆီလွှာအားယာယီဖြစ်စေသော hypoxia ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကြက်သားမြေ ure ဇာ၌များစွာသောသတ္တုများပါဝင်သည်။ ကြေးနီ၊ မာကျူရီ၊ ခရိုမီယမ်၊ ကဒ်မီနီယမ်၊ ခဲနှင့်အာဆင်းနစ်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ များစွာသောစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ၊ သတ္တုအလွန်အကျွံသတ္တုများဖြစ်ပေါ်စေသော၊ မြေအောက်ရေနှင့်မြေဆီလွှာများညစ်ညမ်းစေခြင်း၊ humus အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးအရေးကြီးသောအာဟာရဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကြက်မြေ applying ဇာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မြေဆီသြဇာကောင်းမွန်မှုသည်အဘယ်ကြောင့်အထူးမြင့်မားသည်ဟုထင်ရသနည်း။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြက်သားရဲ့အူတွေဟာဖြောင့်ဖြောင့်တန်းနေတယ်။ အတူတူဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ကြက်မြေ in ဇာထဲမှာပါဝင်တဲ့အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ၊ အော်ဂဲနစ် ၆၀% ကျော်ဟာယူရစ်အက်စစ် (Uric acid) ဖြစ်တယ်၊ ယူရစ်အက်စစ်ပြိုကွဲခြင်းကနိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်စင်များစွာကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ ကြက်သားချေး ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်သည်ယူရီးယား ၇၆.၅ ကီလိုဂရမ်နှင့်ညီမျှသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများသည်သဘာဝအားဖြင့်သန်မာလာသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးသည်ဂျာကင်အင်္ကျီမျိုးသို့မဟုတ်သစ်သီးပင်စပျစ်သီးများ၌ဖြစ်ပျက်ပါက၎င်းသည်ပြင်းထန်သောဇီဝကမ္မဗေဒရောဂါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အဓိကအားဖြင့်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်သဲဓာတ်ဒြပ်စင်များနှင့်ယူရီးယားအလွန်အကျွံအကြားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အလယ်အလတ်နှင့်သဲလွန်စများစုပ်ယူမှုကိုပိတ်ဆို့စေပြီးအဝါရောင်အရွက်များ၊ အနီရောင်ပုပ်ခြင်း၊ သစ်သီးကွဲခြင်းနှင့်ကြက်သားရောဂါများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဓာတ်မြေသြဇာကိုများစွာအသုံးပြုသော်လည်းအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ မကောင်းတဲ့ကိစ္စများရှိလား ထိုကဲ့သို့သောအရှည်တစ်ဝက်သေဆုံးခြင်း, မြေဆီလွှာခိုင်မာခြင်း, မိုးသည်းထန်စွာအမှိုက်, etc ကြက်ချေးသည်မြေဆီလွှာထဲသို့အသုံးမပြုမီကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ကင်းသောကုသမှုကိုဖြတ်သန်းရမည်။
ကြက်သားမြေ organic ဇာသည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအတော်အတန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းတွင် ၁.၆၃% သန့်စင်သောနိုက်ထရိုဂျင်၊ ၁.၅၄% P2O5 နှင့် ၀.၀၈၅% ပိုတက်စီယမ်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများဖြင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။ အချဉ်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်ကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသောအင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်ပေါင်းပင်မျိုးစေ့များကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ ကြက်သားချေး၏ထုတ်လုပ်မှုတွင်အခြေခံအားဖြင့်အချဉ်ဖောက်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများရောနှောခြင်း→ granulation →ခြောက်သွေ့ခြင်း→အအေး→စစ်ဆေးခြင်း→မီတာနှင့်တံဆိပ်ခတ်ခြင်း→ကုန်ချောများသိုလှောင်ခြင်းပါဝင်သည်။
နှစ်စဉ်တန်ချိန် ၃၀၀၀၀ ထွက်ရှိသည့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဇယား
၁။ အရှည် ၄၀ စီ၊ အကျယ် ၃ မီတာနှင့်အကျယ် ၁.၂ မီတာအကျယ်ရှိစတုရန်းမီတာ ၇၀၀ ရှိသည့်ကုန်ကြမ်းareaရိယာတွင်အချဉ်ပေါက်လေးခုတည်ဆောက်ရမည်။
၂။ ကုန်ကြမ်းareaရိယာသည်ရထားလမ်း ၃၂၀ မီတာကိုပြင်ဆင်ရမည်။
၃။ ထုတ်လုပ်မှုareaရိယာသည်squareရိယာ ၁၄၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။
၄။ ကုန်ကြမ်းareaရိယာတွင်ထုတ်လုပ်မှု ၀ န်ထမ်း ၃ ဦး လိုအပ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုinရိယာတွင် ၀ န်ထမ်း ၂၀ လိုအပ်သည်။
၁။ အစောပိုင်းအဆင့် အချဉ်ပေါက်ပစ္စည်းကိရိယာများ ၏ကြက်ချေး၏: groove ဆွေး Turner စက်, crawler ဆွေး Turner စက်, Self-propelled ဆွေး Turner စက်, ကွင်းဆက်ပန်းကန်ဆွေး Turner စက်
၂ ။ Semi- စိုစွတ်သောပစ္စည်း crusher, chain crusher, ဒေါင်လိုက် crusher
၃ ။ ပစ္စည်းကိရိယာများရောစပ်: အလျားလိုက်ရောနှော, disc ကိုရောနှော
4. စိစစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများပါဝင်သည် rotary စိစစ်စက် နှင့်တုန်ခါစိစစ်စက်
5. Granulator ကရိယာ: agitating granulator, disc granulator, extrusion granulator, rotary စည် granulator နှင့်ပတ်ပတ်လည်ပုံဖော်စက်
၆ ။ ခြောက်စက်ကိရိယာများ: rotary စည်လေမှုတ်စက်
၇ ။ rotary အအေးစက်
၈။ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းကိရိယာများ - အရေအတွက်ကျွေးမွေးရန်၊ ကြက်၊
၉။ သယ်ဆောင်နိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာ - ခါးပတ်သယ်ဆောင်စက်၊ ရေပုံးဓာတ်လှေကား။
ရှုပ်ထွေးသောမျိုးကွဲများနှင့်ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားပြန့်ပွားမှု၏ ၁.၁ ထိရောက်သောနည်းပညာ။
2. အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှုနည်းပညာနှင့် ဇီဝကစော်ဖောက်ခြင်းစနစ်.
၃။ အကောင်းဆုံးအထူးဓာတ်မြေသြဇာဖော်မြူလာနည်းပညာ (ထုတ်ကုန်ပုံသေနည်းကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်မြေဆီလွှာနှင့်သီးနှံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အညီပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်) ။
၄။ အလယ်အလတ်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောနည်းပညာ (စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အနံ့) ။
၏ 5. Process ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း.
ကြက်မြေ man ဇာထုတ်လုပ်ရာတွင်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်
အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်အတွက်ကုန်ကြမ်းများ၏အသေးအဖွဲသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အတွေ့အကြုံအရ၊ ကုန်ကြမ်းတစ်ခုလုံး၏ပြည့်စုံမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းလိုက်ဖက်သင့်သည်။ ကုန်ကြမ်း ၁၀၀-၆၀ မှတ် ၃၀ မှ ၄၀%၊ ကုန်ကြမ်းအချင်း ၆၀ မှ ၁.၀၀ မီလီမီတာမှ ၃၅% နှင့် ၂၅% ။ -30% 1.00-2.00 မီလီမီတာ၏အချင်း။ သို့သော်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်အလွန်သေးငယ်သောပစ္စည်းများအလွန်များခြင်းသည်အလွန်သေးငယ်သောအမှုန်များနှင့်မမှန်မှုန်အမှုန်များကဲ့သို့သောပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပြီး၎င်းမှာအလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်ပါ။
ကြက်သားချေးသည်အသုံးမပြုမီအပြည့်အဝပြိုကွဲပျက်စီးရမည်။ ကြက်ချေးနှင့်၎င်းတို့၏ဥများမှကပ်ပါးကောင်များအပြင်အချို့သောကူးစက်တတ်သောဘက်တီးရီးယားများသည်ပုပ်ခြင်း (အချဉ်ဖောက်ခြင်း) ဖြစ်စဉ်မှတစ်ဆင့်မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ အပြည့်အဝပုပ်ပြီးနောက်ကြက်မြေ man ဇာသည်အရည်အသွေးမြင့်အခြေခံဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်လာလိမ့်မည်။
1. အခြေခံအားဖြင့်မကောင်းတဲ့အနံ့; ၂ ။ 3. ကြက်သားချေးသည်ချောင်ကျသောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သဘာဝအခြေအနေများတွင်အချဉ်ပေါက်ချိန်သည် ၃ လခန့်ဖြစ်ပြီး၊ ကစော်ဖောက်ခြင်းထည့်သွင်းပါကအလွန်လျှင်မြန်စွာတက်လာလိမ့်မည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ပေါ် မူတည်၍ ယေဘုယျအားဖြင့်ရက်ပေါင်း ၂၀ မှ ၃၀ အထိလိုအပ်ပြီးစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေတွင် ၇-၁၀ ရက်အပြီးသတ်နိုင်သည်။
ကြက်သားချေးမချမီရေပါဝင်မှုကိုချိန်ညှိသင့်သည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာများကိုကစော်ဖောက်ခြင်း၌ရေပါဝင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုပ်စပ်နေသောအေးဂျင့်သည်ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ခြောက်သွေ့လွန်း။ စိုစွတ်လွန်းခြင်းသည်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ကစော်ဖောက်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါကယေဘုယျအားဖြင့် ၆၀ မှ ၆၅% အထိထားသင့်သည်။